कोरियाली भाषा परीक्षा आंशिक रूपमा खारेज हुँदै |
काठमाडौं-सन् २०१९ पछि कोरिया सरकारले भाषा परीक्षाको नतिजाभन्दा सीप र कार्यदक्षताका आधारमा नेपाली युवा माग गर्ने भएको छ । हाल कोरियाली भाषा परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने युवालाई छनोटको आधार बनाउँदै आएकोमा अर्को वर्षदेखि सीप, कार्यक्षमता र अन्तर्वार्ताको अंकलाई पनि छनोटको आधार मान्ने भएको छ ।
सवारी साधनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू
वरिष्ठतम न्यायाधीश मिश्रको प्रमाणपत्र पनि आयातीत !
करार शिक्षक नियुक्तिको तयारी !
मलेसियामा अनिवार्य फ्रि–भिसा र फ्रि–टिकट